Yesu Wui no, Nsɛm Bi a Ɛsisii (Mateo 27) | Yesu Asetena
YESU WUU WƆ DUA SO
WƆBƆƆ YESU ASƐNDUA MU NO, NSƐNKYERƐNNE BI SISII
Ɛduu “dɔn a ɛtɔ so nsia” anaa awia dumienu no, “esum duruu asase no nyinaa so kɔsii dɔn a ɛtɔ so nkron” anaa awia nnɔn mmiɛnsa. (Marko 15:33) Saa sum no amma kwa. Yɛnim sɛ ɛwom ara a, bosome tumi kyere awia ma esum ba awia ketee. Ɛtaa si bere a bosome apue foforo, nanso bere a wɔbɔɔ Yesu asɛndua mu a esum durui no deɛ, na ɛyɛ Twam afahyɛ bere, enti na bosome no nyinaa apue. Sɛ bosome kyere awia a, ɛnkyɛ, nanso esum a yɛreka ho asɛm yi kyɛe paa. Enti wohwɛ mu a, Onyankopɔn na ɔmaa esum no durui.
Nnipa a na wɔredi Yesu ho agorɔ no, ɛbɛyɛ sɛ nea ɛsii no yɛɛ wɔn nwonwa. Ɛsum no bae no, mmaa nnan bi kɔgyinaa asɛndua no ho. Mmaa nnan no, na Yesu maame ka ho; wɔn a aka ne Salome, Maria Magdalene, ɛnna Maria, ɔsomafo Yakobo Kumaa maame.
Bere a Yesu maame gyina “asɛndua no ho” no, na ɔsomafo Yohane gyina ne nkyɛn. Ná Maria ayɛ dinn rehwɛ ne ba a wawo no atete no no. Ɔhwɛ nea ne ba no refa mu no a, na ɛte sɛ nea wɔde “nkrantɛ tenten” awɔ ɔno Maria. (Yohane 19:25; Luka 2:35) Ɛyaw a na Yesu refa mu nyinaa akyi no, na ɔredwen ne maame Maria ho. Yesu miaa n’ani de ne ti kyerɛɛ Yohane so ka kyerɛɛ ne maame sɛ: “Ɔbaa, hwɛ! Wo ba!” Afei ɔde ne ti kyerɛɛ Maria so ka kyerɛɛ Yohane sɛ: “Hwɛ! Wo maame!”​—Yohane 19:26, 27.
Ɛbɛyɛ sɛ saa bere no, na Maria yɛ okunafo, enti na Yesu de no rehyɛ ɔsomafo a ɔdɔ no no nsa. Ná wahu sɛ Maria mma a aka no nnye ɔno Yesu nni. Enti ɔyɛɛ nhyehyɛe a ɛbɛma obi ahwɛ no na waboa no ama wasom Onyankopɔn. Wei yɛ adepa a yɛbɛtumi asuasua!
Bere a sum no kɔe no mu ara na Yesu kaa sɛ: “Sukɔm de me.” Asɛm a ɔkae no maa nkɔmhyɛ bi baa mu. (Yohane 19:28; Dwom 22:15) Yesu huu sɛ ɛkwan bi so no, wobɛka sɛ nea n’Agya mmɔ ne ho ban bio sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛsɔ no ahwɛ akɔsi ase. Kristo de nne a emu yɛ den kaa asɛm bi, na saa asɛm no, ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ Aram kasa a na Galileafo ka. Ɔkaa sɛ: “Eli, Eli, lama sabaktani?” Ase kyerɛ sɛ: “Me Nyankopɔn, me Nyankopɔn, adɛn nti na woapa me?” Wɔn a wɔgyina hɔ no bi ante ase, enti wɔkaa sɛ: “Hwɛ! Ɔrefrɛ Elia.” Obi tuu mmirika de sapɔw kɔbɔɔ nsa nyinyanyinya mu de tuaa demmire ano na ɔde kɔmaa Yesu sɛ ɔnnom. Nanso ebinom kaa sɛ: “Monnyae no! Momma yɛnhwɛ sɛ Elia bɛba abɛyi no asi fam anaa.”​—Marko 15:34-36.
Afei Yesu teaam sɛ: “Asa!” (Yohane 19:30) Ampa, biribiara a n’Agya somaa no sɛ ɔmmɛyɛ wɔ asase so no, na watumi ayɛ awie. Bere a Yesu rebɛwu no, ɔkaa sɛ: “Agya, wo nsam na mede me honhom hyɛ.” (Luka 23:46) Yesu de ne nkwa hyɛɛ Yehowa nsa; ná ɔnim sɛ ɔbɛnyane no. Kristo de ne werɛ nyinaa hyɛɛ Onyankopɔn mu na afei ɔtoo ne kɔn wui.
Ɔwui no, asase wosoo denneennen maa abotan paapaee. Ná ano yɛ den paa, enti ada a ɛwɔ Yerusalem mu buebue maa emu afunu bɛguu abɔnten. Nnipa a wɔretwam a wɔhuu sɛ afunu deda mmɔnten so no kɔɔ “kuro kronkron” no mu kɔbɔɔ amanneɛ.​—Mateo 12:11; 27:51-53.
Afei ntwamutam a ɛkyɛ Kronkronbea ne Kronkron mu Kronkronbea mu no, emu suan mmienu fii soro bɛsii fam. Nsɛm a ɛsisii no kyerɛ sɛ Onyankopɔn bo fuu wɔn a wɔkuu ne Ba no. Ɛsan nso kyerɛ sɛ afei deɛ, na ɛkwan abue sɛ nnipa bi bɛnya kwan akɔ ɔsoro, Kronkron mu Kronkronbea hɔ.​—Hebrifoɔ 9:2, 3; 10:19, 20.
Ɛnyɛ nwonwa sɛ ehu kaa nkurɔfo. Ɔsraani panin a ɔhwɛ maa wɔkum Yesu no kaa sɛ: “Ampa ara, onipa yi yɛ Onyankopɔn Ba.” (Marko 15:39) Bere a Pilato redi Yesu asɛm a ɔbisaa Yesu sɛ ɔyɛ Onyankopɔn Ba no, ɛbɛyɛ sɛ na ɔsraani panin no wɔ hɔ. Sɛnea nneɛma kɔe no ma ɔbɛhuu sɛ Yesu yɛ onipa pa, na ɔyɛ Onyankopɔn Ba ampa.
Wɔn a wɔde wɔn ani huu nea ɛkɔɔ so no, wɔrekɔ wɔn fie nyinaa, na wɔde wɔn nsa rebobɔ “wɔn kokom.” Nea wɔyɛe no kyerɛ sɛ na awerɛhoɔ ne aniwu ahyɛ wɔn mma. (Luka 23:48) Mmaa a na wɔgyina akyirikyiri rehwɛ no, na wɔn mu pii yɛ Yesu asuafo. Yesu te ase no, sɛ ɔretu kwan a, na ɔtumi ne wɔn kɔ. Wɔn nso, nsɛm akɛse a ɛsisii no kaa wɔn paa.
“BƆ NO ASƐNDUA MU!”
Yesu atamfo teateaam sɛ: “Bɔ no asɛndua mu!” (Yohane 19:15) Hela asɛm a wɔtaa kyerɛ ase “asɛndua” wɔ Nsɛmpa no mu ne stau·rosʹ. Nwoma bi kaa sɛ: “Stauros kyerɛ ‘dua tenten baako,’ anaa dua a ɛwɔ ahoɔden a akuafo tumi de gye ban. Ne nkyerɛase ara ne no; biribiara nka ho bio.”—History of the Cross.
Esum a ɛduruu asase so nnɔnhwere mmiɛnsa no, adɛn nti na yɛbɛtumi aka sɛ ɛnyɛ bosome na ɛkyeree awia?
Dɛn na Yesu yɛe a ɛma yɛhu sɛ ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛn awofo a wɔanyinyin?
Dɛn na asasewosow a ɛsii no kɔfa bae? Asɔrefie hɔ ntwamutam a emu suan mmienu no, na ɛkyerɛ sɛn?
Ɛfiri bere a wɔbɔɔ Yesu asɛndua mu kɔsi ne wuo no, nsɛm bi sisii. Ɛkaa nnipa a wɔhui no sɛn?
Nkrante Antumi Maria
Sɛ awerɛhow a ɛte sɛ “nkrante tenten” ahyɛ wo so a, Yesu maame Maria nhwɛso no betumi aboa wo ma wɔagyina ano.